အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Vanished user 20210825 - ဝီကီပီးဒီးယား
အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Vanished user 20210825
ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် NuDeity !ပြင်ဆင်
--Welcome-Bot (ဆွေးနွေး) ၀၈:၁၄၊ ၂၄ ဇွန် ၂၀၂၁ (UTC)
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်ကတော့ NayiMuu ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးတစ်ခုမှာ (ဒါပါ) သင် ပြင်ဆင်မှု တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုပြီး ပြုလုပ်ခဲ့တာကို ကျွန်ုပ် သတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ ရင်းမြစ်ကိုတော့ သင်မထည့်ခဲ့ပါဘူး။ အခုလောလောဆယ်မှာ အဲဒါကို စာမျက်နှာထဲက ဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့ စာမျက်နှာ ရာဇဝင်မှာ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ အကိုးအကားနဲ့တကွ ပြန်လည်ထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးပြုပြီး ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ အကိုးအကားပြုခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လမ်းညွှန်ချက်တွေ လိုအပ်နေရင်တော့ ကျေးဇူးပြုပြီး လူသစ်များအတွက် အကိုးအကားပြုခြင်း သင်ခန်းစာကို ကြည့်ရှုပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်ုပ်ဖက်က မှားယွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ သင်ထင်မြင်ပါက ကျွန်ုပ်ရဲ့ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာမှာ စာလွှာချန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ NayiMuu® talk ၀၂:၂၁၊ ၁၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ (UTC)
စင်ဒရဲလား (၁၉၅၀ ရုပ်ရှင်)ပြင်ဆင်
This page only exists asaredirect to Disney, but can it be converted into an actual article about Walt Disney's Cinderella? 2600:1700:53F1:5560:98BC:7B94:33FD:A97E ၁၅:၄၁၊ ၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)
I have no idea who wrote that one. I'm 100% sure I didn't write that. I checked the history and my name didn't appear in evenasingle instance. Please yourself. NuDeity (ဆွေးနွေး) ၁၅:၅၅၊ ၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)
I didn't mean that you wrote it (you didn't), but the person who did made itaredirect to Disney and it should haveaproper article. But I don't know how to do it. I can't write Burmese. I just found the page when looking at the Wikidata page and saw it's notaproper article. Should it be deleted? 2600:1700:53F1:5560:98BC:7B94:33FD:A97E ၁၆:၄၆၊ ၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Vanished_user_20210825&oldid=673846" မှ ရယူရန်
၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၇:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၇:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။